नेपालको सुन्दरता प्रचार गर्न नसकेको भ्रमण वर्ष | Sagarmatha TV
नेपालको सुन्दरता प्रचार गर्न नसकेको भ्रमण वर्ष
काठमाडौं । सरकारले तामझामका साथ घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को पहिलो महिना नै नेपालका लागि सुखद रहेन ।
गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकको आगमन दर नै घटेको छ । चीनबाट फैरिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले भ्रमण वर्षमा लक्ष्य अनुसार पर्यटक भित्र्याउन सक्नेमा पनि प्रश्न उठेको छ । सरकारी लक्ष्य अनुसार यो वर्ष २० लाख पर्यटक भित्रिएलान ?
पर्यटनलाई आर्थिक उपार्जनको आधार बनाउने दीर्घकालीन सोचसहित सरकारले अहिले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मनाइरहेको छ । २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित शुरु भएको भ्रमणवर्षको पहिलो महिना भने सन्तोषजनक हुन सकेन । अघिल्लो वर्षको तुलनामा पर्यटकको आगमन दर २ प्रतिशतले घटेको छ ।
यसले भ्रमण वर्षमा २०लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका उब्जिएको छ । सन् २०१९ को जनवरीमा ८१ हजार २ सय ७५ जना पर्यटक भित्रिएकामा यो वर्षको जनवरीमा ७९ हजार ६ सय ८६ जना पर्यटकमात्रै नेपाल भित्रिएका छन् । चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासले पर्यटकको आगमनदर घटेपनि सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुने नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीको दाबी छ ।
भ्रमण बर्षको शुरुवाती दिनमा चीनबाट १३ हजार ३ सय ३ पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । अहिले यो क्रम प्रायः ठप्प छ । तर, कोरोनाको संक्रमण कम हुँदै जाँदा पर्यटक बढ्ने र लक्ष्य पूरा गर्न सरकार तथा निजी क्षेत्र जुट्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा बताउँछन् ।
पर्यटकको आगमन दर घट्नु कोरोना भाइरसको संक्रमण मात्र कारण नभई पूर्वाधारको विकास नहुनु मुख्य कारण रहेको जानकारहरु बताउँछन् । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का संयोजक सुरज बैद्यले पनि यो अवस्थामा ओरालो लागेको पर्यटनलाई क्रमस सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
पर्यटन व्यवसायीले आफ्नो चार्डको रुपमा लिने गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष नेपालका प्राकृति सम्पदाको प्रचार गरी आर्थिक उपार्जन गर्ने माध्यम हो । अनि विश्वमा नेपाललाई चिनाउन पनि यो वर्ष कामयावी हुनुपर्छ । त्यसका लागि नेपालको पर्यटनलाई मजबुद बनाउन सबै क्षेत्र एक हुन आवश्यक छ ।
स्वास्थ्य सामग्री बोकेको सेनाको स्काई ट्रक गन्तव्यसम्म नपुगी फिर्ता
कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको असर कम गर्न सरकारबाट राहत प्याकेजको घोषणा (सम्पूर्ण विवरणसहित)
कोरोना भाइरस : ३३ हजार ९ सय बढीको मृत्यु
एक हप्ता लकडाउन थप, अब २५ गतेसम्म हिडडुलमा प्रतिबन्ध
बुटबलमा आइसोलेशनमा भर्ना भएका बिरामीको मृत्यु, स्वाब परीक्षण रिपोर्ट आउन बाँकी
लकडाउन बढ्ने निश्चित, मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन हुन बाँकी
नेपालगंज सीमामा खटिएका प्रहरी विरामी : लक्ष्यण कोरोनासँग मिलेपछि क्वारेन्टाइनमा लागियो
एक जना कोरोना संक्रमितका कारण २० गाउँका ४० हजार बढी क्वारेन्टाइनमा
बिरालोमा समेत देखियो कोरोना भाइरसको संक्रमण !
कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न सेनाले ल्यायो मोबाइल एप
अष्ट्रेलियामा ८ नेपाली कोरोनाभाइरस संक्रमित
कोरोना जोखिमलाई ध्यान दिँदै सिरहा कारागारबाट २१ कैदीबन्दी रिहा
चीनबाट आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री लिएर काठमाडौं आइपुग्यो विमान
कोरोनाको सङ्क्रमणबाट स्पेनकी राजकुमारीको निधन
कोरोनाका कारण बिदेशी मदिरा र महंगा सवारीसाधन आयातमा प्रतिबन्ध
घरभाडा नलिन सरकारले गरेको आग्रहमा घरबेटीहरुको संस्था सकारात्मक
कोरोना भाइरस : २४ घण्टामा अमेरिकामा २४८ को मृत्यु, १७ हजार बढी संक्रमित
तिहाड जेलबाट ३५६ कैदीहरु अन्तरिम जमानीमा रिहा
कोरोना संक्रमण र उपचारबारे थाहा पाउने एप सार्वजनिक
लकडाउनले अलपत्र परेका ९ सय ६४ पर्यटकको उद्धार
अब ५ मिनेटमै कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण